कार्ल मार्क्स समाधिस्थलमा कमरेड भाउजूसँग बरालिँदा | samakalinsahitya.com
कार्ल मार्क्स समाधिस्थलमा कमरेड भाउजूसँग बरालिँदा
कालो बादल आकाशमा मडारिरहेको छ । कति खेर पानी खनिने हो ठेगान छैन । उसो त बी बी सीको मौसमी भाविष्यवाणीले बिहानको एघार बजेपछि दिनभर वर्षा हुन्छ भनको छ । पानीका कारण घरबाट हतार हतार तयार भएर निस्कन्छु । घरबाट आठ मिनेट जतिको पैदल यात्रा छ ट्रेन स्टेशनसम्मको । लामा फटको मार्दै छु । आजको यात्रामा साथ दिएकी छिन कमरेड भाउजूले ।
ट्रेन स्टेशनमा खासै भीडभाड छैन । अफिस र स्कूल जानेहरुले हो ट्रेनमा भिडभाड बढाउने । त्यो समय बिती सक्यो । पौने नौ बजेको ट्रेने गुड्यो । कमरेड भाउजूलाई बाटा भरि हातैमा समातेको थिएँ । टे«नमा सिट खाली देखियो । छेउको सिटमा राखे ।
यो हतारको यात्रा हो कार्ल माक्र्सको समाधिस्थलसम्म । त्यहाँ पुग्न करिव पैंतालिस मिनेटको एउटा ट्रेन यात्रापछि फेरि अर्को टे«न बदल्नु पर्दछ । दोस«ो ट्रेनको यात्रा करिब दश मिनेटको छ । स्टेशनमा उत्रेपछि दश पन्ध्र मिनेट पैदल हिँडनु पर्दछ । यति सामान्य जानकारीको भरमा यात्रामा निस्केको छु । बाँकी जे होला देखा जाएगा ।
लामो ट्रेन यात्रामा समय कटाउन कोटको खल्तीबाट आइफोन झिकेँ । र इमेल चेक गरेँ । केही इमेलहरुको जवाफ फर्काएँ । त्यसपछि फेसबुक लगिन गरेँ । केही फेसबुके साथीहरुको जन्मदिन देखायो । ति मध्ये आधा भन्दा बढीलाई चिनेको छैन । कहिल्यै भेटको पनि छैन । तर पनि लामो समयदेखि फेसबुक मित्र भएको नाताले आफनै जस्ता लाग्दछन तिनीहरु । दुःखसुख बराबर बाँडने गरेका छौं फेसबुक मै । फेरी फेसबुक पनि एउटा समाज जस्तो भइसक्यो आजकल । भर्च्युल समाज । त्यही समाजको असल सदस्यको नाताले औपचारिकता पुरा गर्न भटाभट शुभकामना दिएँ ।
ट्रेन ठाउँ ठाउँमा यात्रु चढाउँदै उर्तादै दौडि रहेको छ, आफनो समयमा । अझ भनौं ठीक समयमा रोकिदै दौडिदै । अपवाद बाहेक बेलायतमा ट्रेनलाई हेरेर घडीको समय मिलाए हुन्छ । उसो त घडीले पनि सँधै ठीक समय कहाँ दिन्छ र ? राम्रै चलिरहेको घडी बिग्रेर कुनै पनि बेला बन्द पनि हुन सक्दछ । मानिसको ज्यान पनि एकै छिनमा के हुन्छ कसलाई थाहा? कुनै चिजको ग्यारेन्टी छैन यो संसारमा । ट्रेनको के कुरा ?
फेसबुक लगआउट गरेँ । सर्सती नेपालका समाचार पढन कान्तिपुर, नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्टको वेबसाइटमा छिरेँ । उही संविधान शभाको किचकिच, महँगी, बेरोजगारी, बन्द हडताल, खाना पकाउने ग्याँसको अभाव । झर्को लागेर समाचार पढन छाँडे । के पढनु उही समाचार हरेक दिन ? पत्रिका हेर्दा लाग्दछ नेपालका पत्रकारलाई साहै्र गाहो छ पत्रिकाको पाना भर्न । धन्न पो तानतुन गरेर समाचारपत्रको पेज भर्दछन । मालिकले खोजेर ल्याएको विज्ञापन कोच्दछन । अनि बोलीको ठेगान नभएका नेताका भाषण छाप्दछन । नेताले भोलिपल्ट मैले बोले कै होइन भनिदिन्छन । धन्न उनीहरुले बोलेको कुराको पत्रिकामा भूलसुधार पनि छाप्नु पर्दैन । नत्र कत्रो आपत ! जनतालाई उल्लु बनाए बनाए, पत्रकारलाई पनि उल्लू बनाउने चण्डाल नेता छन देशमा । देश के उँभो लागोस ? देशको अवस्था देखेर दुःख लागेर आउँदछ ।
आइफोन बन्द गरेर कोटको खल्तिमा राखेँ । कमरेड भाउजूलाई सुम्सुम्याउँदै काखमा राखेँ । झयालबाट बाहिर हेरेँ । सूर्य नारायणको अत्तोपत्तो छैन । धुम्म अँध्यारो जस्तो छ । मानिसहरुको खासै भीड छैन बाटामा । जनवरी महिनाको उराठ लाग्दा छोटा दिन । पानी र हिउँको बारम्बार दर्शन पाइन्छ । तर सूर्य नारायणको दर्शन दुर्लभ हुन्छ जाडो महिनामा । यी सबै हेर्ने बानी परिसक्यो ।
ट्रेन अन्तिम गन्तब्यमा रोकिएको कुरा फटाफट मानिसहरु उत्रेपछि थाहा पाएँ । अब अर्को ट्रेन बदल्नु पर्ने भयो । अघि आएको जमिन माथि माथि दौडने ट्रेन थियो । अबको ट्रेन जमिन मुनी चल्ने ।
जमिन मुनी ट्रेन चलेपछि नेटवर्क सिग्नल हुँदैन । फोनले खेलौनाको काम मात्रै गर्दछ, गेम खेल्ने । गेम नखेल्नेले अध्यारो सुरुगं मार्ग भित्र चल्ने ट्रेनको स्टेशनको उज्यालामा देखिने मानिसहरु र त्यस स्टेशनको भित्तामा टाँसिएको ठूल्ठूला विज्ञापनका पोस्टर हेरेर चित्त बुझाउँदछन् ।
यात्रा छोटो थियो । करिव दश मिनेटमै स्टेशनमा उत्रिएँ म । मान्छेको भिड छिचोल्दै बाहिर निस्के । जमिन मुनि चल्ने ट्रेनलाई ट्यूब भनिन्छ लन्डनमा । हरेक ट्यूबमा मान्छेको भीड अच्चकाली हुन्छ । नहोस पनि किन ? एकसय बाउन्न बर्ष अघि बनाईएको सुविधा अहिलेको बढदो जनसंख्याको अनुपातमा कसरी पुगोस ?
बहिर निस्केपछि आइफोनले सिग्नल टिप्यो । एउटा टेक्सट म्यासेज आएको रहेछ ।
‘तपाईं कता ?’ साथी जोनाथनले पठाएको ।
उसलाई थाहा थियो आज मेरो छुटटी हो भनेर ।
‘चिहान घारीमा ।’ छोटो एसएमएस पठाएँ ।
‘कसको निधन भयो ?’ उसले दुःखी हुँदै सोध्यो ।
‘विस्तृत भरे भनौंला ।’ यति लेखेर मैले कुरा टुंग्याएँ ।
ट्रेन स्टेशनबाट करिव दश पन्ध मिनेट हिँडनु पर्ने कार्ल माक्र्सको समाधिस्थल पुग्न । यति मात्रै थाहा थियो मलाई । बाटो थाहा थिएन ।
प«विधिले सजिलो बनाई दिएको छ । खल्तीबाट आइफोन झिके । जानु पर्ने ठाउँको ठेगाना टाइप गरेँ । गन्तब्य बाह« मिनेट टाढा रहेको जनायो । त्यसले देखाएको बाटोमा अगाडि बढे । एकसय मिटर ठीक अगाडि गएपछि देब्रे मोडिनु भन्यो । म देब्रे लागेँ । त्यसपछि सिधै जानु भन्यो । त्यतै लागेँ । बाटामा खासै मानिसहरु छैनन । अलिक बेरपछि दाहिने मोडिनु भन्यो । मैले सो आज्ञा पालन गरेँ । र अगाडि बढदै गएँ ।
करिब सात आठ मिनेट हिँडेपछि एउटा पार्क अगाडि पुगेँ । दिशा निर्देश गर्ने गुगल म्याप पनि अलमल पर्यो । एकैछिनमा फेरी नयाँ बाटो बतायो । पार्कबाट दाहिना जाउ । करिब सय मिटर दाहिना गएपछि देब«े जाउँ भन्छ । उसको गन्तब्य त उही अगि आएको ट्रेन स्टेशन तिर पो देखायो । म फेरी पार्कको गेट अगाडि फर्के ।
बिल्कुलै मानिसहरुको चहलपहल छैन पार्क अगाडिको गल्लीमा । कोही बाटामा हिँडलान र ठेगाना सोधौंला भनेर पर्खेर बसेँ । सानो बच्चालाई डोर्याएर आउँदै गरेकी एक अंग्रेज महिलालाई परैबाट देखेँ । पार्क अगाडि आइ पुगेपछि अंग्रेजीमा सोधेँ ।
‘तपाईलाई थाहा छ, कार्ल माक्र्ससको समाधिस्थल ?’
‘यो पार्क भित्रबाट जानु पर्दछ । बाहिर निस्कने बित्तिकै तपाईको देब्रेमा एउटा गेट हुनेछ । त्यहाँबाट भित्र पस्नोस, त्यहीँ कार्ल माकर््स बाँचिरहेका छन् ।’ कुराबाट लाग्दथ्यो उनमा कार्ल माक्र्स प्रति सम्मान छ ।
धन्यवाद भने मैले ।
‘तपाईं इन्डियन हो ?’ उसले सोधी ।
नेपाली हो भने ।
‘तपाई माओवादी हो ? फेरी सोधी ।
‘हैन हैन, म सामान्य मानिस हुँ ।’ कुरा यतिमै टुग्याएर बिदा मागेँ । अनि उसले भने अनुसार पार्क भित्र छिरे ।
हिउँदमा पात झरेका उजाड रुख र हिउँले खाएर कक्रिएका भुईका घाँस बसन्त पर्खि रहेका थिए । छोटो पैदल यात्रा रहेछ, करिब तीनचार मिनेट मै पार्क बाहिर निस्कँे ।
देब्रेपटटी एउटा गेट थियो । भित्र प्रवेश गरेँ । गेटमा बसेको ब्यक्तिलाई भित्र जान चाहेको कुरा बताएँ । उसले एउटा हाते पर्चा थमाउँदै भन्यो चार पाउण्ड शुल्क लाग्दछ । पैसा तिरेर भित्र प«वेश गरेँ । हातमा भएको पर्चामा समाधिस्थलको बारेमा सामान्य जानकारी थियो । भित्री पानामा भएको नक्सा पल्टाएर कार्ल माक्र्सको समाधिस्थल खोजेँ । गेटबाट दुइ मिनेट पनि नलाग्ने रहेछ । एकै छिनमा पुगिहालेँ ।
वरिपरि विभिन्न ब्यक्तिहरुको समाधिस्थल भएको ठाउँमा कार्ल माक्र्स विशाल अजंगको अर्धकदको सालिक ठडिएको देखेर अचम्म लाग्यो । शरिरमा एक प्रकारको तरंग पैदा भयो । मुटठी कसेर हात उठाउनु पर्दथ्यो होला, अगाडि पुगेपछि श्रद्धाले मेरो शिर निहुरियो । नमन गरेँ महान ब्यक्तित्वलाई ।
खासगरी कमरेड भाउजूलाई कम्युनिष्ट दर्शनका प्रवर्तक कार्ल माक्र्सको सालिक देखाउनु थियो । अझ भनौं कार्ल माक्र्सलाई कमरेड भाउजू देखाउनु थियो । कमरेड भाउजू र कार्ल माक्र्सको भेटघाट भएको कुरा संसारलाई देखाउनु थियो । संसारलाई देखाउने प्रमाणको रुपमा फोटो खिच्नु थियो । तर त्यहाँ म एक्लै गएको थिएँ ।
त्यस सुनसान समाधिस्थल वरपर हेरेँ । त्यहाँ बिल्कुल मुर्दा शान्ति थियो । फोटो खिची माग्नु पार्यो कोही छन कि भनेर नजर लगाएँ ? करिव दश मिनेट यता हेरेँ उता हेरे अहँ कोही देखिएनन । फर्केर गएँ गेटमा । टिकट काटने ब्यक्तीलाई नै अनुरोध गर्नु पर्यो भनेर ।
अठार बीस वर्षका दुइजना गोरी युवती क्यामेरा बोकेर मूल गेटबाट भित्र पस्दै गरेको देखेँ । म टक्क अडिएर वरपरको फोटो खिच्न थालेँ । उनीहरु पनि फोटो खिच्दै थिए । फोटो खिची दिन अनुरोध गर्ने अनुकुल समय पर्खिरहेको थिएँ । उनीहरु फोटो खिची सकेछन् क्यारे । त्यहीँबाट फर्कन लागेको देखेपछि अनुरोध गरेँ ।
एउटा कालो कपाल भएको विदेशीले मस्त तरुनीलाई गरेको सो अनुरोधले उनीहरु धकाए । जवाफ नै दिएनन । म आफू लेखक भएको र मेरो पुस्तक यहीँबाट सार्वजनिक गर्न चाहेको बताएँ । र पुस्तक देखाएपछि कार्ल माक्र्सको समाधिस्थलसम्म गएर फोटो खिचिदिन राजी भए ।
उनीहरुले मेरो आइफोनबाट मेरो धीत मरुजेंल फोटो खिचिदिए । खिचेको फोटो पटक पटक देखाउँदै कति फोटो खिचे, खिचे ? आखिर जति पटक खिचे पनि म उही हुँ, माक्र्सको सालिक उही थियो । धुम्म परेको दिन र एन्टीलाइट परेर भने जस्तो राम«ा फोटा आएनन । जे आयो त्यसैमा चित्त बुझाएँ । र उनीहरुलाई धन्यवाद दिएर विदा गरँे ।
त्यहीँबाट मेरो पुस्तक कमरेड भाउजू आफैले बिमोचन गरेँ भनेर फेसबुकमा र टविटरमा फोटो पोष्ट गरेँ । त्यसपछि माक्र्सको समाधीस्थल वरपर ककसका समाधी रहेछन भनेर हेर्न निस्केँ ।
सन १८३९ देखि संचालनमा आएको यो विशाल समाधिस्थलमा धेरै नाम चलेका लेखक, विद्धान, कलाकार, राजनीतिकर्मी, वैज्ञानिक आदिको समाधिस्थल रहेछ । सैंतिस एकडमा जमिनमा फैलिएको रहेछ । बाउन्नहजार वटा समाधिस्थलमा एकलाख अडसटठी हजार जना समाधिस्थ गरिएको रहेछ । कतिपय परिवारको एउटै समाधिस्थल हुँदो रहेछ । जिउँदो हुँदा सँगै रहेका परिवार मृत्युपछि पनि सँगै समाधिस्थ गर्ने यो चलन मलाई मन पर्यो । परिवारको साथ जन्मदेखि मृत्युसम्म !
दार्शनिक कार्ल माक्र्सको समाधिस्थलको जग्गा जिन्दगीभर साथ दिएका उनका प्रिय मित्र र कम्युनिष्ट दर्शनका प्रवर्तक मध्येका एक एङगेल्सले किनी दिएका रहेछन् । सन १८८३ मा निधन भएर समाधिस्थ गरिएका माक्र्सको त्यहाँ सन १९५६ मा विशाल ठूलो सालिक बनाईको रहेछ ।
माक्र्सको समाधिस्थलको अर्को पटटी नजिकै अफ्रिकन कम्युनिष्ट पार्टीका नेता युसुफ डादु, क्लाउडिया जोन्स लगायतका समाधि रहेछ ।
रमाईलो रोचक कुरा के छ भने जिन्दगीभर माक्र्सका कटटर बिरोधी, आलोचक तथा राजनैतिक विचारक हर्बट स्पेनसरको समाधिस्थल भने माक्र्स ठिक अगाडि रहेछ । परस्पर बिरोधी तथा आलोचकको समाधिस्थल यसरी आम्ने साम्ने राख्नु भनेको स्वर्गमा पनि विरोध र तर्क गरिरहुन भन्ने त होला नि । आफ्नै तर्कले एकछिन त मनमनै हाँसो पनि उठयो ।
हुन त त्यहाँबाट माक्र्ससको सालिक हटाउन कम्युनिष्ट बिरोधीहरुले बेला बेलामा बिरोध पनि गर्दा रहेछन । सन १९७० बम प«हार गरेर ध्वस्त बनाउन खोजिएको र सन् १९८१ मा तोडफोड गरेर नष्ट गर्ने प्रयास गरिएको रहेछ । तर दुबै योजना सफल भएन । आजकल पनि बेला बेलामा त्यो सालिक हटाउन बिरोध गर्दा रहेछन् । यस्तो घटना थाहा पाउँदा नेपालमा प«थम जनआन्दोलन ०४६ र दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा तोडफोड गरिएका सालिक सम्झन्छु । सालिक भत्काएर विचार कहाँ मर्दछ र ? त्यो त क्षणिक आवेग बाहेक केही होईन ।
वरपर घुमी ककसका सालिक रहेछन हेर्दै थिएँ । पानीका मसिना छिटा बर्सन थाले । हतार हतार ट्रेन स्टेशन तर्फ दौडिएँ । ट्रेन स्टेशन पुगरे भिजेको कपाल र लुगा टक्टकाएँ ।
पाँच मिनेटपछि ट्रेन आउने सूचना मोनिटरमा डिस्प्ले भएको थियो । आइफोन खल्तिबाट झिकेर फेसबुक लगिन गर्ने विचार गरेँ । जमिन मुनि भएकोले नेटवर्क सिग्नल थिएन । त्यो त भुसुक्कै बिर्से छु । त्यसपछि अघि खिचेका फोटाहरु हेर्न थालेँ । हेर्दा हेर्दै यति मग्न भएछु कि ट्रेनबाट उत्रेका मानिसको भीडले धक्का दिएपछि मात्र थाहा पाएँ ट्रेन त प्लेटफर्ममा अगि नै आइसकेको रहेछ ।
करिब दश मिनेटपछिको छोटो यात्रापछि अर्को ट्रेन बदल्नु थियो । अब जमिनमाथि चल्ने ट्रेनमा चढेँ । जमिनमाथि चल्ने ट्रेन भएकोले टेलिफोनमा सिग्नल मज्जाले पक्डियो । हतार हतार फेसबुक लगिन गरेँ । अहो कति धेरै ‘लाईक’, कमेन्टस आएका ? धेरैले पुस्तक बिमोचनको बारे हृदयदेखि शुभकामना र बधाई दिएका थिए ।
फेसबुकका एक जना मित्रले लेखे –‘किन कार्ल माक्र्सको समाधिस्थलमा कथासंग्रह बिमोचन गरेको ?’
मैले जवाफ दिएँ –‘यसको बारेमा कुनैदिन लेखौउँला ।’
‘प्रमुख अतिथि छैन, सभापति छैन, कार्यक्रमको ब्यानर छैन, आफैले आफ्नो पुस्तक बिमोचन गर्ने यो कुन चलन हो ?’ एकजना ढर्रावादी लेखकले इनबक्समा म्यासेज पठाए ।
उनलाई पनि अघि लेखेको जवाफको कपि गरेर टाँसिदिए । र मनभरि अनेकथरिका कुरा खेलाउँदै ट्रेनको यात्रामा पुस्तक बिमोचनको उत्साहले मच्चिदै आएँ ।
सर्जक भन्दा ठूलो अरु को हुन सक्छ ? आफूले बिहे गरेर ल्याएको दुलहीको घुम्टो उघार्न बाहिरको मान्छे बोलाउने? आफूले जन्माएको सन्तानको मुहार हेर्न अरुको सहयोग लिने ? यस्ता विचारहरु केही वर्षदेखि मनमा आइरहेको थियो । एक दिन मैले निर्णय गरेँ–‘आफ्नो पुस्तक अब देखि सके आफै बिमोचन गर्दछु नसके अरुबाट मरिगए बिमोचन गराउँदिन ।’ सोही पूर्व निर्णय अनुरुप आफैले आफ्नो कथासंग«ह बिमोचन गरेँ । हुन सक्दछ यो मेरा अराजक विचार हो । जसले जे भनून म आफ्नो निर्णयमा अटल छु ।
त्यसो त कार्ल माक्र्सको समाधिस्थलमा कथासंग्रह बिमोचन गर्न अगि धेरै पटक सोँचे । गर्नु कि नगर्नु भनेर कसैलाई सोधिन । यति सम्म कि कथाकार श्रीमती र ठूला भएका छोराहरुलाई पनि सोधिन । न त मेरा साथीहरुलाई सोधेँ ।
ठाडो भाषामा भन्ने हो भने समाधिस्थल भनेको चिहानघारी । चिहानघारीमा कुनै शुभ कार्य कसरी सम्पन्न हुन सक्छ ? यही परम्परामा हुर्केका मेरा परिवार र साथी भाइ । उनीहरुबाट आउन सक्ने नकारात्मक उत्तरका कारण कसैलाई सोधिन । अन्धविश्वासलाई च्यालेन्ज गर्न मैले माक्र्सबाटै सिकेको हो । माक्र्सकै अगाडि उभिएर बिमोचन गर्ने भएपछि अरुलाई किन सोधूँ ? माक्र्सले नै भनेका छन –‘धर्म भनको अफिम हो ।’
कथासंग्रह त्यहाँबाट बिमोचन गर्नु पर्ने धेरै कारण छन । त्यसमा केही रोचक र अनौठो संयोग पनि छ ।
मेरो साहित्यको यात्राको श्रेय माक्र्सवादी साहित्यलाई जान्छ । आठ कक्षा पढदादेखि नै लुकीछिपी माक्र्सवादी साहित्य पढने गरेको थिएँ । त्यसैको निरन्तरताले मलाई साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा र ज्ञान दियो । धन्य छु माक्र्सवादी साहित्य प्रति, जसले मलाई संसार बुझने चेतना दियो ।
बेलायत आउनु अगि बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा बाह« वर्ष बसेँ । म बसेको ठाउँबाट बीस मिनेटको बसको यात्राबाट पुगिन्थ्यो, ब«सेल्सको मुटु ‘ग«ेण्ड प्यालेस ।’ त्यहाँ बाह«ैमास पर्यटकको भीड हेर्न लायक हुन्छ । त्यहाँको चोक र पर्यटकको भिडभाड देखेपछि बसन्तपुर तथा पाटन दरवार स्क्वायर झझल्को आउँदछ ।
त्यस स्क्वायरको दक्षिण पटटी एउटा प्रसिद्ध क्याफे छ । त्यही क्याफेमा बसेर माक्र्स र एङगेल्सले विश्वलाई हल्लाउने कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेखेका थिए । त्यहाँ अहिले पनि क्याफे र रेष्टुरेण्ट संचालित छ । त्यस्तो ऐतिहासिक क्याफेमा बसेर कैयौं पटक कफी पिउने शौभाग्या मिलेको थियो । एकपटक त त्यहीँ बसेर कफि पिउँदा पिउँदै कविता पनि लेखेको थिएँ । म कति भाग्यमानी !
अझ रोचक कुरा भनौ – उक्त कथासंग्रहका अधिकांश कथामा नेपालमा माओवादी द्धन्द्धकालको समयमा बेलायत पलायन भएका कमरेडहरु र केही कमरेडहरुबाटै पिडीत पात्रहरु छन । तिनीहरुलाई सांकेतिकरुपमा कम्युनिष्ट दर्शनका प्रर्वतक माक्र्सको समाधिस्थलसम्म पुर्याउने चाहाना थियो ।
त्यस्ता महान दार्शनिक ब्यक्तिबाट प्रभावित म । यस्तै प्रभाव र संयोगका कारण मैले सो कथासंग्रह माक्र्सलाई स्मरण गर्दै उनैको समाधिस्थलबाट बिमोचन गरेको हो ।
ट्रेनले आधी बाटो पुरा गरि सक्यो । बाहिर सिमसिमे पानी परिरहेको छ । ट्रेन मै समाचारपत्र र अनलाइन पत्रिकाको लागि पुस्तक बिमोचनको समाचार खेस्रा बनाएँ ।
ट्रेनबाट उत्रने बित्तिकै स्टेशनमै फेरि फेसबुक खोलेँ । प्रसस्त बधाई र शुभकामना आएका रहेछन । कसैलाई जवाफ नदिइकन आइफोन खल्तिमा हालेर पानीमा भिज्दै फटाफट घर तर्फ पाईला बढाए ।
घर पुगेपछि आफूलाई पुछपाछ गरेर अर्को लुगा लगाएँ । फटाफट कम्प्युटरमा बिमोचनको समाचार टाइप गरेर पत्रपत्रिमा पठाएँ । अनलाईन पत्रिकाले त उति नै खेर भटाभट समाचार छाप्न थाले । फेसबुकमा हल्लाखल्ला भएको त्यो अनौठो खालको पुस्तक बिमोचनको समाचार कुरेर बसेका रहेछन जस्तो लाग्यो अनलाईन पत्रिकाका सम्पादकहरु ।
पुस्तक बिमोचनको समाचारले यति धेरै महत्व पायो कि म आफैं छक्क परेँ । मैले थाहा पाएसम्म नेपालका राष्ट्रियस्तरका दैनिक, साप्ताहिक पत्रिकामा र अनलाईनमा गरी पचासी ओटामा समाचार आएको रहेछ । सबै पत्रकार मित्रहरुले ठूलो गुन लगाएर सहयोग गर्नु भयो । आएजति सबै समाचारलाई फेसबुकमा राखँे । कति मित्रहरुले त्यही समाचारका मुनि प्रतिकृया लेखे –‘अब त किताबै नपढे हुने भयो । .... पुस्तकको समीक्षा, टिप्पणी पत्रिकामा नछापिए पनि पुस्तकले राम्रै बजार पाउने भयो... आदि आदि ।’
यसपटक सोसियल मिडियाले तुरुन्त पार्ने प्रभाव र त्यसको ब्यापकताका बारे प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ । धेरै दिनसम्म एउटा सफल काम सम्पन्न भएको आनन्दको अनुभूतिले तरंगित भइरहेँ ।